‘काठमाडौंले मात्र लिग फुटबल धान्न सकेन’ - Khelpati
‘काठमाडौंले मात्र लिग फुटबल धान्न सकेन’
आइतवार, माघ १८, २०७७ खेलपाटी संवाददाता
प्रशिक्षक मेघराज केसी । फोटो : एन्फा
काठमाडौं । फुटबल जोगाउने हो भने काठमाडौं केन्द्रित संरचनालाई बाहिर लैजान पर्छ । मोफसलमा हुने प्रतियोगिताले नेपाली फुटबल माथि लग्दैन । मोफसलमा जति पनि फुटबल भईरहेका छन्, त्यहाँ फुटबलको नियम हुदैन ।
सतप्रतिशत ‘लज अफ द गेम’ पनि छैन । देशका शीर्ष क्लब खेल्ने भनेपछि त्यही अनुसार हुनुपर्ने हो । यसरी फुटबल विकास हुँदैन । विकास गर्ने भनेको लिग हो, त्यो काठमाडौं केन्द्रित छ । आर्थिक हिसाबले काठमाडौंले लिग धान्न सकेन । त्यसैले फुटबललाई देशभरी फैलाउनै पर्छ ।
एकैपटक एन्फाले सक्दैन । तर ए डिभिजन लिगमा मोफसलका टिमलाई बिस्तारै प्रवेश गराउन आवश्यक छ । प्रदेशको टिमलाई पैसाको दुख पर्दैन । टिमपनि स्तरीय बन्छन् । ए डिभिजन खेल्ने काठमाडौं, ललितपुरमा पनि सिमित क्लब हुन्छन् । अरु क्लब देशभरका क्षेत्रबाट आएको खण्डमा मात्र देशको फुटबल विकास हुन्छ ।
ललितपुरबाट एकमात्र ए डिभिजन लिग खेल्ने क्लब भयो भने जिल्लाले १० करोड खर्च गर्न पनि समस्या छैन । त्यही अनुसार पोखराको टिम मात्र भए १० करोड खर्च गर्न गाह्रो छैन । पैसा धेरै भए खेलाडीको स्तरीयता पनि बढ्छ । खेल्ने मान्छे पनि धेरै हुन्छ ।
जनताले फुटबलमा लगानी गरेको सही ठाउँमा पनि हुन्छ । मानौं अहिले लिग भयो । जावलाखेल र फ्रेन्ड्स क्लबबीच खेल भयो । तीन सय दर्शक पनि हुदैन । त्यसमा पनि टिकट नलिने धेरै हुन्छन् । ललितपुरको एकमात्र टिम भए रंगशाला भरिन्छ । एकै खेलमा कम्तीमा ३० लाखै उठेपनि अप्रत्यक्ष रुपमा क्लबलेनै पाउने हो । नसोचेको टिकटको पैसा उठ्छ ।
मानौं विराटनगरको एक टिम छ । ललितपुरको टिम विराटनगर खेल्न गएको खण्डमा के होला ? विराटनगरको रंगशाला भरिन्छ । लिगमा आर्थिक स्रोत भनेकै टिकट हो । त्यो दर्शक बिनाको लिगबाट सम्भव छैन ।
यसो हेर्दा काठमाडौंले लिग अब धान्न सकेनं । एकैपटक क्लबलाई बाहिर निकाल्न गाह्रो छ । कुनै न कुनै तरिकाले काठमाडौंमा भएका क्लबलाई विस्तारै ‘ब्याक’ गराएर अरु क्लब छिराएको खण्डमा सबै ठाउँमा फुटबलको लोकप्रियता बढ्छ । झापाले एउटा ए डिभिजन क्लब थेग्न सक्छ । झापामा अरु फुटबल होला । जिल्ला लिग होला । त्यो अलग कुरा हो । झापालाई एउटा ए डिभिजन क्लब हुदाँ समस्या पर्दैन, विराटनगरलाई पर्दैन । पोखराले सक्छ । काठमाडौ जस्ताले दुईटा सम्म थेग्न सक्छ ।
धनगढी गोल्डकप हुन्छ । आयोजकले दुई तीन जना काठमाडौं, दुईटा अफ्रिकन राख्छ । १० थरी खेलाडी बटुल्छ । धनगढीको टिम छैन । यदी त्यहाँ एउटा ए डिभिजन टिम बनेको खण्डमा पैसाको समस्या पर्ला त ?
मोफसलका टिमलाई विस्तारै शीर्ष डिभिजनको लिगमा स्थान दिने हो भने विस्तारै–विस्तारै काठमाडौंको भार कम हुन्छ । काठमाडौंको एउटा टिम बी डिभिजनमा झर्ने बित्तिकै माथि आउनै सक्दैन । त्यसरी विस्तारै काठमाडौंको प्रभुत्व कम भएर जान्छ । बाहिरको बढ्छ ।
कसरी टिकेको छ फुटबल ?
फुटबललाई माया गर्ने मान्छेहरु हजारौं छन् । हामी विभिन्न ठाउँमा जान्छौं । आफ्नो घरबाट बिगारेर, छोरा छोरीको स्कुलको पैसा नतिरेर खेलाडीलाई खाजा खान दिने अभिभावक हामीले देखेका छौं । राम्रो खेल्नेलाई बुट किन्दिएर, हौसला दिने हजारौं छन् । जसलाई नेपाली फुटबलमा कसैले चिन्दैन । त्यस्तै मान्छेका कारण अहिले फुटबल टिकिरहेको हो ।
जो अहिले ‘फ्रन्ट’मा देखिरहेका मान्छेहरु छन् । मैले फुटबलमा यसो गरे, उसो गरे भनिरहेका छन् । ती मान्छेले फुटबलमा आफ्ना लागि बाहेक केहीपनि गरेको छैन ।
क्लबलाई कत्तिको गाह्रो छ ?
क्लबले ए डिभिजन खेलिरहेका छन् । क्लब टिकाउन ज्यादै गाह्रो छ । यता उता गरेर आम्दानी २० लाख हुन्छ । खर्च ५० लाख हुन्छ । क्लबले खेलाडी ठगिरहेको हुन्छ । सम्झौतामा एउटा हुन्छ, पैसा बुझ्दा त्यो हुँदैन । क्लबको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै छ । थोरै आम्दानीमा क्लब चलाउने छन्, कतिले आफ्नो घर त्यहीबाट चलाईरहेका छन् । कुनैपनि क्लब फुटबल खेलेर फाईदामा छैन । सबै क्लब घाटामा छ ।
विभिन्न स्रोत साधनबाट पैसा जुटाएर फुटबलमा खन्याउँदा पनि क्लबलाई पुग्दैन । सिमित केही छाडेर सबै सामाजिक क्लब हुन् । ती सामाजिक क्लबको फुटबलबाहेक अन्य धेरै उद्धेश्य र कामहरु हुन्छन् । अरु सबै कुरा घटाएर फुटबलमा मात्र लगानी गर्दा पनि पुगिरहेको छैन । इज्जत र प्रतिष्ठाका लागि सबै कुरा ऋणमा फुटबलमा हाल्न खोज्छन्, हालेर पनि चाहिने जति पुग्दैन । र स्तरीयता कायम हुन सकेको छैन ।
कता लैजाने फुटबल ?
नेपालमा फुटबललाई माया गर्ने धेरै छन् । पैसापनि खर्च गरिरहेका छन् । खर्चको सन्तुलन मिलाउन सकिएको छैन । त्यो सन्तुलन मिलाउन सकियो भने नेपालीकै पैसाले फुटबल चलाउन पुग्छ । लिग गर्न २० करोड खर्च हुन्छ । २० करोड खर्च काठमाडौंले थेग्न सक्दैन । तर पुरै नेपालले १ अर्ब थेग्न त सक्छ । काठमाडौंमा केन्द्रित रहेको फुटबललाई बाहिर निकालेर देशभर फैलाउन पर्यो ।
लिग फुटबल देशभरै गर्न सकियो भने टिकटकै पैसाले पुग्छ । प्रत्येक खेलमा टिकटको पैसा राम्रोसंग उठाउन सकियो भने त्यहीबाट देशको फुटबल चल्छ । विगतमा विभिन्न परिस्थिती र कारणले गाह्रो भएको होला । पचासौं वर्षदेखि काठमाडौंमा रहेका ए डिभिजन क्लबलाई बाहिर निकाल्न समय लाग्ला । तर कुनै न कुनै उपाय अपनाएर शीर्ष डिभिजनको फुटबललाई मोफसलसंंग जोड्न आवश्यक छ । काठमाडौंमा मात्र हैन, पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फुटबललाई फैलाउन आवश्यक छ ।
(प्रशिक्षक मेघराज केसीसंग खेलपाटीका हिमबिक्रम केसीले गरेको कुराकानीका आधारमा)
भद्रगोल खेलकुद !
चोटले थलिएको चन्द्रपुर
वालिङले अभ्यासको लागि मैदान पाएन !